2 Sano Kadib Heshiiskii UWSLF iyo Itoobiya - Warar Xaqiiq ah iyo Faallooyin Deegaaanka Soomaalida/Ogaden/Kilil5-Faallo.com
Connect on Facebook	2 Sano Kadib Heshiiskii UWSLF iyo Itoobiya
July 5, 2012 | Filed under: Faallo,Wararka oo Dhan | Posted by: admin Akhyaarta qiimaha iyo qaayaha leh sida aad intiinna badan xasuustaanba waxaa bishan ku beegan 2 sano guuradii kasoo wareegtay heshiiskii ay United Western Somali Liberation Front (UWSLF) iyo Dawladda dhexe ee Itoobiya kala saxiixdeen. Inkastoo ay heshiiska rasmiga ka hor soo xaroodeen hoggaankii UWSLF haddana waxaa uu heshiiska rasmiga ahi dhacay maalin Khamiis ah oo ku beegnayd Bisha Luulyo (July) 28, sannadkii 2010-ka.
UWSLF oo horay uga mid ahaan jirtay Ururkii Al-Itixaad, markuu ururkaasi burburayna la baxday UWSLF ayaa iyadu ka mid ahayd ururada ku kacsan xukuumadda Itoobiya. Khaasatan waxay jabhaddani ka mid ahayd 2-da jabhadood ee ugu muhiimsan ee ka dhaqdhaqaaqa Soomaali Galbeed (Ogaden) iyadoo ta kalana sida aad ogtihiinba ay tahay Ogaden National Liberation Front (ONLF) oo iyadu wali dagaalkii ay kula jirtay Xukuumadda Itoobiya sii wadda.
Haddaba 2 sano kadib soo xeroodkii UWSLF maxaa qabsoomay? Maxay usoo kordhiyeen shacabka oo nabad, caddaalad iyo horumar ah? Ma ku saxsanaayeen inay tanaasulaan? Hadda halkay ku dambaysay madaxdii iyo ciidankii jabhadda UWSLF? Yaa ka faa’iiday soo xaroodka ay soo xeroodeen? Yaase ku hungoobay?
Su’aalahaas iyo kuwo kale oo badanba waxaan rajaynaynaa inaan ku lafo gurno qoraallo gaar ah oo aan ugu tala galnay howshaas? Akhristayaashu waxay kaga qayb qaadan karaan taariikhdaas qormaysa inay noo soo diraan wixii xog ah ee ay ka hayaan UWSLF iyo wax Alle wixii ay is leeyihiin akhristayaashu waxay anfacaysaa Shacabweynaha Soomaaliyeed inay ogaadaan.
Waxaad naga sugtaanba waa qormooyin gaar ah oo arrimahaas aan soo sheegnay ku saabsan (7-aadyada soo socda Eebbe idankii).
Nagala soco www.faallo.com
21 comments on “2 Sano Kadib Heshiiskii UWSLF iyo Itoobiya”	jinole ali on August 4, 2012 at 10:54 pm said:
walala haddii aan ka dhibto ama kudaro fikirkayga aniga waxaa ay ilatahay waxa ay so kordhiyen malahan bal waxan ogahay ragii shalay udiriray diin oo ayagiiba ay noqden dhibayal shacabka ayago waliba la socoda amxarada
Reply ↓	shacab on July 12, 2012 at 7:25 am said:
Ascw walaal waxan sowada akhriyey fikradihii badnaa ee dadka kadhibteen arimaha gobalka aniguna bal aa kudarsado aniga ah qof shacab ah uwslf waa kusaxsanayd inay umadooda utagaan runtii aniga waxan qabaa inay yihiin umada kali ah ee dadka jahliga iyo gumaysiga kasaari karta hadayna qori kagasaarina diin iyo aqoon ayay kaga saarayan umad markii ay waxbarato ayay gumaysi kabaxdaa lakin umad jahli ah gajaysan yaan been la isudheegin waa wadaniyiintii wadanka labada jabhad marka la isbarbar dhigo. Nin qurba joogana wadan maxoraynhayo wali lama hayo madaxda onlf ilma kiis ah oo intuu qurba kayimid xabad qash kasiyey jamacaday wada dhigtaan geeljirihii xolaha dhaqanhayay ayaa lagu xasuuqay mEesha waxana u arka laba gooraba inayna dadka wax faa iido ah ugu maqnayn haday heshiis qatan iyo hadii kaleba runtii shaqsiyaad wanaagsan onlf waalaga helayaa diin iyo wadinayadba leh lakin cumuumka urur xal keeni ama hadaba ahaya uma arko. Anigu marka aan siudaas leehay uslf uma xaglinhaya waa dha